ကျွန်တော်ရဲ့ blog လေးကို ကျွန်တော်သိသမျှ တတ်သမျှ ဖတ်မိ၊မှတ်မိသမျှ
ကျွန်တော့်ရဲ့ post မှာ သုတ၊ရသ၊ ပညာနှင့် စာပဒေသာဆိုပြီး(၄)ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်.
သုတမှာ သိမှတ်ဖွယ်ရာအဖြာဖြာကို ဖော်ပြထားပါတယ်.
ရသမှာတော့ ခံစားမှု တစုံတရာပေးစွမ်းနိုင်မဲ့ စာတွေကဗျာတွေဖော်ပြပေးထားပါတယ်.
ပညာမှာတော့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တွေကိုဖော်ပြထားပြီး
စာပဒေသာမှာတော့ ဟာသ၊ဗေဒင် စတဲ့ ကဏ္ထ စုံကို ဖော်ပြထားမှာပါ.
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့ 'စု၊တု၊ပြူ' မူအတိုင်း စု ဆောင်းထားသမျှ
တခြားသူများရဲ့စာများနှင့် သူတို့ရဲ့ စာတွေကို အတု ယူပြီး ကိုယ်တိုင်ပြု စုထားတဲ့စာတွေအစုံပါဝင်မှာပါ.
တခြားသူများရဲ့ စာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါ မူရင်းရေးသူအမည်သိလျှင်
ဖော်ပြပြီး မသိခဲ့ရင်တော့ 'ဖတ်မိသမျှ၊မှတ်မိသမျှ'လို့ပဲရေးပေးထားပါမယ်.
၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသောသူငယ်ချင်းများ စာပေရောင်းရင်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အဖြစ်အပျက်တခုကို ကိုယ်သာ သူ ဆိုရင်ဆိုပြီး ပေါ့လေ .စဉ်းစားပေးကြပါ
လူတယောက်မှာ သူမျှော်လင့်ပြီးချစ်နေသူ တစ်ယောက်ရှိတယ် .. သူချစ်နေသူက သူ့ထက် အစစ အရာရာ သာလွန်တယ်.. ငွေ ဂုဏ် အသိုင်းအ၀ိုင်းအကုန်ပေါ့.. သူ့ ချစ်သူက သူ့ကို တခါတလေ အလေးပေးလို့ အခါတလေ ခေါက်ထားတတ်တယ်.. သူဟာ သူ့ချစ်သူအတွက် အရေး ကြိးတဲ့ သူ တယောက် မဟုတ်ဖူးပေါ့...
ဒီလိုအချိန်မှာ သူ့ကို ချစ်တဲ့ သူကို သူတွေ့လာတယ် ..သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူက သူ့ထက် အစစအရာရာ နိမ့်တယ်.. ဒါပေမဲ့..သူလိုတိုင်း အနားမှာ၇ှိနေပေးသူ ..သူ့ အတွက် အလိုကျ နေပေးသူပေါ့.. ဒီအခါ သူ့အတွက် သူ့ ကို ချစ်တဲ့ သူကို မြင်တိုင်း သူ့ကိုသူ မြင် ရသလိုကို ခံစားရတယ်.. ဒါနဲ့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူ ကို သူရွေးလိုက်တယ် ..
အချိန် ကြာလာတဲ့ အခါမှာ.. သူ့ ကို ချစ်တဲ့ သူနဲ့ သူအကြားနည်းနည်း ပြသနာလေးတွေရှိလို့ အေးစက်စက်ဖြစ်လာတယ်
ဒီ အချိန်မှာ အရင်က သူ ချစ်ရတဲ့ သူက သူ့ကို သူဟာ သူချစ်ရတဲ့ သူအတွက် အရေးပါသော သူ တယောက်ဖြစ်တယ် .မရှိမဖြစ် ဖြစ်တယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာကော...
ကဲ ဒီ အခြေ အနေမှာ သူဘာလုပ်သင့်သလဲ
မန့်ပေးကြတဲ့ အားလုံးသော သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
. ခုလို ၀င်ဖြေ ပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဒိမေးခွန်းက လူတယောက်ရဲ့ အချစ်ပြသနာအစစ် မဟုတ်ပါဘူး.. ဒီအခြေအနေပေါ် ကိုယ် ရွေးတာကို အခြေခံပြီး ကိုယ်က ဘာလုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လိုလူဆိုတာကို
ဒါပေမဲ့ ဒီ test က ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတွေ CEO အဆင့်တွေ အတွက် ဆိုရင်တော့ အသုံးဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
အလယ် အလတ် အုပ်ချုပ်သူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မှာပါ.. ကဲ ..အဖြေ အချိန်ရောက်ပါပြိ.
ကိုယ့် က ချစ်ရသူကို ရွေးသူတွေကတော့.... လုပ်ငန်းမှာ ရှေ့တက်လမ်း အများကြီးရှိတဲ့ တကယ့် Manager ကောင်းတွေပါ.. ဘယ် အချိန်မှာ ဘာကို လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိသူတွေပါ
တခါတလေမှာ ဘ၀အတွက် မလိုအပ်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ငဲ့ ညှာမှုတွေကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို နားလည်သူတွေပါ.. လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်မှု ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လုပ်နိုင်သူတွေပါ..
အပြိုင် အဆိုင် အတိုက် အခိုက်များတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အတွက် တကယ်ကိုသင့်လျော်ပါတယ်..ပြိုင်တိုင်းနိုင်အောင် တိုက်နိုင်သူတွေပါ..
ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူကိုရွေးသူတွေကတော့ leader ကောင်းတွေပါ..လူချစ်လူခင် များတဲ့ အထူးသဖြင့် လက်အောက် ငယ်သားတွေချစ်ခင်လေးစားခံရသူတွေပါ..
သူတို့တွေက လူအများရဲ့ စိတ်ကို ပေးဆပ်မှုကိုအလေးထားတဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ motivator coordinator ဆိုတဲ့ အလုပ် မျိုးနဲ့ ပိုကိုက်ပါတယ် .
ဒိနေ၇ာမှာ Manager နဲ့ leader ကွာတာလေး ပြောချင်ပါတယ်
Management is about process.Leadership is about people.Not all Managers have learnt to lead and therefore they will not suceed at some very key areas of working with people.
ဒီလိုတွေရေးလိုက်လို့ အင်းး ဒိတယောက် ဘာတွေပြောနေတာလဲ သူမေးတော့ အချစ် ..စပြောတော့ management ဘာတွေလဲလို့ တွေးကြမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်
စဆုံးဖတ်ပြီးရင် ရှင်းသွားမှာပါ..သည်းခံပြီး ဆုံးသည်အထိလေး ဖတ်ပေးကြပါ
လုပ်ငန်းတခုမှာ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေမှာ စလုပ်တဲ့ အောင်ခြေ အဆင့် ဘာမှသိပ်ပြောစရာမ၇ှိပါဘူး ..သူများခိုင်းတာ လုပ်ရတာကို
Management theory တွေမှာတော့ အရှင်းဆုံး Lower level manager လို့ သုံးတတ်ကြပါတယ်.. အောက်ဆုံးရဲ့ အထက်ဆင့်ကနေsupervisor အထိ ပါပါတယ် .
သူတို့ အတွက် က ဆုံးဖြတ်စရာလဲမများပါဘူး အထက်က ဒါလုပ်ဆိုလုပ် ဒိစည်းကမ်းလိုက်နာဆိုလိုက်နာရတာကို
အထက်ဆုံးအဆင့်ပြသနာမ၇ှိပါဘူး... သူက ခိုင်းရတဲ့သူကို
management term အရတော့ top level manager တွေပေါ့ ..သူတို့အတွက်ကတော့ လုပ်ငန်းဆိုတာ သူတို့ ထုဆစ်တဲ့ ပန်းပုတခု မို့
သူတို့လိုသလိုပုံဖော်နိုင်ပါတယ်.. လုပ်ငန်းဆိုတာ သူတို့အတွက် သွန်လိုသွန် မှောက် လိုမှောက်ပေါ့
အဲပြသနာက အလယ် အလတ် အဆင့်ပေါ့
Duputy Manager ကနေ စလို့ အထက်ဆုံးရဲ့ အောက် တဆင့်နိမ့်အထိပါပါတယ်
Middle Level Manager တွေပါ .ဒီ အဆင့်တွေဟာ တကယ့်ကို ရွေးချယ်စရာများသလို ဆုံးဖြတ်ရခက်တာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရသူတွေပါ..
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ်သူကလွဲရင် ဒီ အလယ်အလတ် အုပ်ချုပ်သူ အဆင့်တွေမှာ ရှိနေကြသူများပါတယ်
ကျွန်တော်မေးထားတာမှာပါပါတယ် .. သူ ချစ်ရသူဆိုတာ ကိုယ့် အထက် က အရာရှိ အကြိးအကဲကို ရည်ညွန်းပါတယ်.. ဘယ် သူကများ ကိုယ့်အရာရှိမျက်နှာသာပေးမခံချင်
ချီးကျူးမခံချင်တာ ရှိပါသလဲ.. ကိုယ်က မျက်နှာ လိုချင်လို့ ဘယ်လောက် ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ကိုယ်ကြိုးစာသလောက် အသိအမှတ်ပြုခံရသူနည်းပါတယ်
နောက် ကိုယ်ကို့ ချစ်ရသူ.. ဒါကတော့ ကိုယ့်လက်အောက်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ..ကိုယ်စားပြုပါတယ်.. ကိုယ်က သူတို့အထက်ကဖြစ်နေတယ် ..အကြိးအကဲဖြစ်နေတယ်
ဒါကြောင့် ကိုယ်လိုတာမှန်သမျှ သူတို့က လုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ် ..
အဲ့လို အထက်နဲ့အောက် အကုန် အဆင်ပြေနေချိန် ဆိုရင် ဒိလိုရွေးချယ်စရာက ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဒိမှာ ပြသနာတွေစလာပါပြီ... လစာကိစ္စ.. အလုပ်ချိန် ကိစ္စ overtime ကိစ္စ စတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အထက်နဲ့အောက် ကပြသနာဖြစ်ပြီ.. ကိုယ်က အလယ်ဆင့် (၂)ဖက်ညှပ်ပါပြီ.
ခု ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ အခြေ အနေလို အောက်နဲ့ကလဲ အလုပ်ကိတ်စတွေအဆီအငေါ်မတည့်တာနဲ့ သူတို့ တောင်းဆိုတာတွေကို ကိုယ်က အထက်နဲ့ ကိုယ်နိုင်သလာက် ညှိပေးနေတယ်..ဒါကို သူတို့က သူတို့လိုချင်တာသာ သိပြီး ကိုယ့် အခက် အခဲကို မငဲ့ လို့ မသင့်မတင့် ဖြစ်နေချိန်.. (ဘယ်လို ရှင်းရှင်း ကြားအတိုက်နဲ့ ရှင်းမရချိန်)
အထက်ကလဲ ကိုယ့်ကို ဦးစားပေးပြီး ကိုယ့်ကို အောက် လက်ငယ်သားနဲ့ ခွဲထုတ်ပြီ .. မက်လုံးတွေ ..အခွင့်အရေးတွေပေးပြီ... ကိုယ် မပါ၇င် ကိုယ့်တက်လမ်းပါ ပိတ်သွားနိုင်ပြီ
ဒီ အခြေအနေ ကိုယ် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲ.. ကိုယ်ဘာကိုရွေးမလဲ
အလုပ် ထဲရာက်နေသူတော်တော်များများ ဒီလိုအခြေအနေကို ကြုံဖူးပါတယ် ... အနည်းနဲ့အများပေါ့ နော် ...
ဒိလိုရွေးအခြေအနေက ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ ချစ်သူ(၂)ယောက်ကြားရွေးရတာထက်ခက် မှာပါ.. (၂)ဖက်လုံးနဲ့ တည့်အောင် ဘယ်လိုညှိမလဲ..
ဖြစ်တတ်လာတာ.. ဖြစ်နေကျကတော့ ... အောက်လက် ငယ်သားအတွက် နားလည်အောင် ရှင်းလို့ သူ့ဘက်ပါတဲ့ အခါ ..အလုပ်သမားတော်လှန်ရေးနဲ့ သပိတ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်
(ဒါတောင် .. ကိုယ်လို အောက်ကိုကြည့်တဲ့ အလယ်အလတ်အုပ်ချုပ်သူတွေများမှ..မဟုတ်ရင် ကိုယ်သာလွင့်လို့ သွားမှာ)
အထက်ဖက်ပါတော့ ..စားဖားကြီးလို့ အပြောခံရပါပြီ...
ကဲ ဒီ အခြေ အနေကို ဘယ်လိုတွေထိန်းကြမလဲ......လာပါပြီ management skill တွေ
Management skills ထဲကမှ တခုဖြစ်တဲ့ Communication and negotiation skills လာပါပြီ..
စောနက ကျွန်တော့် ဥပမာထဲက လူ.. ဘယ်သူကိုရွေးလို့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ.. ဆိုတာ သူရဲ့ နေရာကနေ ဆက် တွေးပေးပါ
Management ဆိုတာနဲ့ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးဆိုပြီးလက်မရှောင်ကြနဲ့နော် ..
Management ဆိုတာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လူတွေပြောနေကြတာပါ.. မိန်းကတွေက ယောင်္ကျားတွေထက် ဒီနေရာမှာတော်ပါတယ်
ကမ္ဘာဦး ထဲက မိန်းမသားတွေက အလယ် အလတ် မန်နေဂျာ အဖြစ်ကို သဘာဝရဲ့ အပ်နှင်းမှုနဲ့ အလိုအလျှောက်ရပြီးသားပါ.
မိသားစုတခုမှာ အဖေနဲ့ သားကမတည့်ဘူး ..ဒိ အခါ ကြားကအမေက ဘယ်ဘက်ကပါ၇မလဲ .. ဘယ်လိုညှိမလဲ ..
အမေတွေဟာ မိသားစုမှာ middle level manager တွေပါ..
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ် အုပ် ချုပ်တာမှာ ဒီ အရည်အချင်းတွေလိုမှာပါ....
ဒါကြောင့် နောက်တခါကျရင် Management skills တွေအကြောင်းပြော၇အောင်ဗျာ
တောင်းပန်ခြင်း။ ။ management ဆို၇င် ဘယ်သူကမှ ဆက်မပြောချင်.မဆွေးနွေးချင်မှန်းသိလို့ ပြသနာလေး တခုလောက် ဖန်တီးလိုက်တာပါ.. စိတ်ပူပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ကျေးဇူးပါ..
သူ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ သူ နဲ့ အ၇င် ပြန် ပြေလည်အောင်လုပ်ပါမယ်.သူကကိုယ့်ကိုချစ်တာဆိုတော့ ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးတာမြန်မှာပါ.
နောက် ကိုယ်လိုအပ်တိုင်းရှိနေပေးခဲ့သူပါ..သူနဲ့ကိုယ့်ကြား အထင်မှားတာမရှိတော့မှ
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူရဲ့ ကိစ္စကို ပြောပြပါမယ်..အထင်မှားတာတွေ မဖြစ်အောင်ပါ..ပြီးမှ ကိုယ်ချစ်ရသူကို ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်အောင် သေချာစွာရှင်းပြပါမယ်..
လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်တော့ ..လက်အောက် ငယ်သားကိုအရင်ထိန်းပါမယ် .. သူကော ကိုယ်ရောက ဘ၀တူတွေဆိုတာကို နားလည်အောင် ပေါ့.. သူတို့ ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှ အထက်က တောင်းဆိုလို့ရနိုင်တာတွေကို ရှင်းပြပါမယ်
ပြိးမှ အထက် ကို ကိုယ်အားလုံးရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ သူတို့ကပေးနိုင်လောက်တဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့် အရေး ကို ဘာကြောင့်ပေးဖို့သင့်ကြောင်းပေးချင်လာအောင်ညှိပါမယ် .
စာပေးစကားဝိုင်းမှာတော့ သူငယ်ချင်းတချို့ အတွက် တော်တော်လေးကို အမှတ်ရကြတဲ့ post လေးပါ
ဒိပို့လေးကနေသိလိုက်ရတာကတော့ တခါတလေမှာ ကိုယ်ကမရည်ရွယ်ပါပဲနဲ့ သူတပါးရဲ့ စာနာ စိတ်ကို testing လုပ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားလို့ နောက် တခါဘယ်တော့မှ ဒိလိုမျိုး ခံစားချက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥာဏ်စမ်းတွေမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး
Posted by Win Thu at 8:11 PM No comments:
ကဲ လူဘ၀ဇတ်ခုံအစုံစုံမှာ ဖြစ်ပျက်ဘ၀ တွေ့ဆုံရမည့် ရှုပ်ထွေးသည့်အရေး ပေါင်းသင်းရေးမှာ တရားမျှတာစွာရန်ဖြစ်နည်းလဲ တနည်းပါသကိုးးးး
လူ့ဘ၀မှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာတာနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံစရာ လူအသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာရှိလာပါပြီ..ဥပမာ- ကလေးဘ၀ မိဘ မောင်နှမ ဆွေမျိုးညာတိ
အရွယ်ရောက်ပြီးမှ သေဆုံးချိန်အထိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၊အိမ်ထောင်ဘက် နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများ
ဒိလို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းဆိုတာ ရှိလာတာနဲ့ အမျှ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းဆိုတာ ရှိလာပါပြီ
အဆင်မပြေတဲ့ ဆက်ဆံရေးဖြစ်လာတဲ့ အခါ ခိုက်ရန်ဒေါသနဲ့ ပြောဆိုတာ ငြင်းခုံတာ ..တနည်းရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိလာပါပြိ
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုထဲက ရှိရင်းစွဲပြသနာက တစတစကြိးထွားလာပြီး နောက်ပိုင်းတော့ ဆက်ဆံရေးပြိုကွဲခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပါတော့တယ်
ရန်ဖြစ်ခြင်းအမျိုးမျိုး ကို မြင်ဖူးကြမှာပါ..တချို့ ရန်ဖြစ်ခြင်းတွေက တခါထဲ ရှိရင်းစွဲဆက်ဆံရေးတွေကို ရပ်ဆိုင်းသွားစေပါတယ်..ဒီလိုရန်ပွဲမျိုးကို လူတိုင်းကြုံဖူးကြပါတယ်
တချို့ရန်ဖြစ်ခြင်းတွေက ပြသနာကို အေးသွားစေတတ်တာကိုလဲတွေ့ဖူးမှာပါ.ဥပမာ- လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာ အမတ်တွေငြင်းခုံကြတယ် ရန်ဖြစ်ကြတယ်.အစည်းအဝေးပြိးတဲ့ အခါ သင့်မြတ်စွာနေနိုင်ကြတယ်
ကဲ ..ရန်ပွဲခြင်း အတူတူ ရလဒ်တွေ က ဘာကြောင့်ကွာသ လဲ ..ဆိုရင် တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတစွာ ရန်ဖြစ်တတ်ခြင်း ဆိုတာ ကွာသွားလို့ပါ..
ကိစ္စတခုခုအတွက် ငြင်းခုံကြပြီဆိုရင် ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မှာသာ အဖြေရှာ ရန်ဖြစ်ခြင်းပါ.တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းမှာ ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော်ခြင်း ဆိုတဲ့ အရင့်အရင်က ဖြစ်ခဲ့သော ပြသနာများကိုစွဲထည့်ခြင်း
ဖြစ်တဲ့ပြသနာနဲ့မဆိုင်သော သူတပါးအားနည်းချက်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဝေဖန်ခြင်း ပြစ်တင်ရ့တ်ချခြင်းတို့မပါဝင်ပါ.
တခြားမဆီ မဆိုင်သော အရင်က ဖြစ်ဖူးသော ပြသနာများ ကိစ္စများကိုဆွဲထည့်ခြင်း (ချီးခြောက်ရေနူးခြင်း)မပါဝင်ပါ
ကိုယ့်ဘက်က မှန်ကန်ကြောင်းသာ ပြဆိုရန် ဆန္ဒရှိပြီး တဖက်သားပြောဆိုမှု ကို လက်မခံ ပယ်ချခြင်းပါ.. ဖြစ်ပြိးသမျှ အရင့်အရင်က ကိစ္စတွေမှာ သူများမှားခဲ့တာတွေကို အကုန်ပြန်ဖော်ခြင်း
ယခု ဖြစ်ပျက်နေသော ပြသနာကို အဓိကမထားပဲ အရင်က သူများမှားခဲ့သော မဆိုင်သောကိစ္စတွေကိုပါဆွဲထည့်ခြင်း၊
(တခါတလေမှာ မမှားခဲ့တာကိုလဲ မှားခဲ့သယောင် လုပ်ကြံဇတ်များ ပြောဆိုခြင်း တို့ပါဝင်ပါတယ်)
.ပြောသမျှစကားတိုင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တဖက်သားကို အပြစ်ရှိသူအဖြစ် ဖြစ်သမျှ ကိစ္စတိုင်းမှာ တဖက်သားသာလျှင် တာဝန်ရှိသူအဖြစ် အပစ်ပို့ခြင်းများပါဝင်ပါတယ်.
၁ မိဘနဲ့ သားသမီး
ပြသနာ- ကလေးမှာ စာမေးပွဲတွင် အမှတ်မကောင်းခြင်း ကျခြင်း
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း - မင်းက ဒိစာမေးပွဲလေးတောင် အောင်အောင် မဖြေနိုင်ဘူး ငတုံး ချီးဘရိန်း အသုံးမကျတဲ့ကောင် သုံးစားလို့ကိုမရဘူး မွေးရကျိုးမနပ်ဘူး @#@$@^%#$^&%&*^&*^
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း - ကဲ ခုစားမေးပွဲကို မင်းကျတယ် ..ဘာကြောင့်ဒိလိုဖြစ်တာလဲ ..ဆရာမသင်တာတွေကိုနားမလည်တာလား ဘာတွေသင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲရှိသလဲ မင်းစာအကြိုးစားတာလား စိတ်မ၀င်စားတာလား
ရလဒ် - တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် သားသမီးက လဲပြန်ပေါက်ကွဲမယ်..ကျုရှင်ကောင်းကောင်းမထားနိုင်တာ မိဘကဂရုမစိုက်တာ ကို ပြန်အပစ်တင်မယ်..ဒိကနေရန်ပွဲကဆက်လက်ကြီးထွားပါမယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း - ရှုံးနိမ့်ခြင်းအတွက် ခံစားနေရပေမဲ့ ကလေးက မိဘနဲ့ အတူ သူ့လိုအပ်ချက်ကို ဆွေးနွေးလာမယ် ..သူလိုအပ်တာကို မိဘကတတ်နိုင်တာဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ ရန်ပွဲက ဒိမှာတင် ပြီးလို့ မူရင်းပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါမယ်
ပြသနာ ချိန်းထားရာကို တစ်ယောက်ယောက်ကနောက်ကျမယ်
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း နင်ကနောက်ကျလိုက်တာ ဒိမှာစောင့်ရတာသေတော့မယ်စောင့်နေရသူကိုအားမနာတတ်ဘူး အမြဲနောက်ကျတယ် ငါက နင့်လိုအချိန်ပေါနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ အလုပ်တွေရှိတယ် $#%#^%$&^&*
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း နင်နောက်ကျလိုက်တာဟယ် ဘာလို့နောက်ကျနေလဲ နင်ခဏခဏနောက်ကျတတ်တာဘာလို့လဲ
ရလဒ်- တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် သူငယ်ချင်းချင်းကြားစိတ်ခုတာစပါတော့မယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် နောက်ကျသူလဲ သူနောက်ကျခြင်းအကြောင်းရှင်းပြလို့ ကိုယ့်ကိုတောင်းပန်ပါမယ်..နောက်လဲ နောက်မကျအောင် သတိထားတတ်သွားပါမယ်
့ပြသနာ ယောင်္ကျားလေးကတခြားမိန်းကလေးနဲ့ သတင်းများ ကို မိန်းကလေးကကြားခြင်း
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း ရှင် ကျွန်မကွယ်ရာမှာနောက် တစ်ယောက်နဲ့ ရှုပ်နေတယ်ဆို ..ယောင်္ကျားတွေက မယူရသေးဘူး ဇတ်လမ်းကစပြီ ..$#%^#@#$@#$@#$@#$
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း ရှင် တခြားမိန်းကလေးနဲ့ သတင်းတွေကို ဘယ်သူတွေဆိက ဘယ်လိုကြားထားပါတယ် (နာမည်အတိအကျမပြောချင်တောင် ဘယ်လိုသတင်းဇစ်မြစ်က ရတယ်ဆိုတာတော့ ပြောရပါမယ်) .. အများမျက်စိမှာတော့ ဘယ်လိုထင်မြင်နေပါတယ် ..ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
ရလဒ် ..တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် တဖက်သားသိက္ခာကိုထိခိုက်မှတော့ မဟုတ်လဲ ယောင်္ကျားလေးဘက်ကဘုတောတော့မှာပါ..ဒီကနေ ရန်ပွဲစလို့ ပြတ်သည်အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် ဒိလိုပြောပြလို့ မေးလို့ သူ့ သိက္ခာ မယုံဘူးဆိုပြီး .ဒေါသထွက်ချင်ထွက်နိုင်ပါတယ် .ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူတွေကပြောတယ် ဘယ်လိုကြားတယ်ဆိုတာ သေချာပြောထားတဲ့အတွက် သူ့ဘက်ကလဲ သေချာစွာရှင်းပြရပါတော့မယ် .. သူ့အတွက်လဲ နောက်တခါ အထင် မမှားအောင်နေထိုင်တတ်သွားမှာပါ
ပြသနာ မိန်းကလေးကယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းများနဲ့ ကလပ်တက်ခြင်း
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း မင်းကကွာမိန်းမဖြစ်ပြီး အနေအထိုင်ကိုမတတ်ဘူး တွေ့သမျှလူ လိုက်လျားလိုက်လျားသွား .. ဟိုသူနဲ့ တရုန်းရုန်း ဒီလူနဲ့လဲ ဟီးဟီးဟဲဟဲ #@%$%$#%^
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း မင်း ဒိလို ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်တာကို နားလည်ပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ထခြားသူတွေမျက်စိထဲတမျိုးမြင်မှာဆိုးလို့ပါ
ရလဒ် တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် မိန်းကလေးရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားထိမှတော့ တခွန်းမခံ ရန်တွေ့တာ ခံရပါမယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ပထမတော့ ငြင်းဆန်တာတွေ လက်မခံတာတွေရှိလောက်ပေမဲ့ သူ ကောင်းဖို့ ပြောမှန်းနားလည်အောင် ပြောတတ်ရင် လက်ခံလိုက်နားလည်လာမှာပါ
ပြသနာ- မိန်းမက ယခုတပတ် အတွင်း အိမ်အလုပ်လုပ်သည်များ လစ်ဟင်းခြင်း၊ ချက်ပြုတ်သည်များအရသာမရှိခြင်း
ဒီ ပြသနာမှာ စဖော်တာကတော့ လင်ယောင်္ကျားပါ.
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း မင်း ဟင်းချက်တာက ညံ့ လိုက်တာ တော်တော်အသုံးမကျတဲ့မိန်းမ အိမ်မှု ကိစ္စတောင်မနိုင်ဘူး စိတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး #@#$@$%^
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း ရှင်မ ဒီ တပတ်အတွင်း ဟင်းချက်တာ လက်ရာတွေညံ့နေတယ် ဘာတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေလဲ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် အိမ်မှု ကိစ္စတွေကိုလစ်ဟင်းရသလဲ
ရလဒ် တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် မိန်းမကလဲ ဟင်းချက် မကောင်းတာလေးကို ဒီလိုပြောမှတော့ လင်ယောင်္ကျားဖက်ကလစ်ဟင်းမှုတွေကို လဲသူကပြန်ပြောပါတော့မယ်..ဒီမှာတင် အကြီးအကျယ်ရန်ဖြစ်ခြင်းစပါတော့မယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် မိန်းမအနေနဲ့ ယောက်ျားအပေါ်မကြည်လင်တဲ့ တခြား ကိစ္စတွေရှိရင်တောင် ဒီလိုညှိနှိုင်းခြင်းဆန်တဲ့ ရန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တခြားကိစ္စရန်စလို့မရတော့ပါဘူး
ပြသနာ -ယောင်္ကျားဝင်ငွေမှာ အရင်ထက်နည်းလာခြင်း ၀င်ငွေမကောင်းခြင်း မလောက်ငခြင်း
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း ရှင်လစာ တပဲခြောက်ပြားနဲ့ ဘယ်လိုစားမလဲ ..ယောင်္ကျားဖြစ်ပြီးယူထားတဲ့ မိန်းမတောင် ၀အောင်မကျွေးနိုင်ဘူး ၀င်ငွေတောင် လောက်ငအောင်မရှာနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျား အလကားယောင်္ကျား #@$%%$^%^&*^*
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း ရှင့် ဒီလ၀င်ငွေက အသုံးစရိတ်ကို လောက်ငအောင် မရှိဘူး .အိမ်မှာဆန်လဲကုန်နေတယ် အိမ်လခကနောက်လပေးရမယ် ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲ ဘယ်လိုတွေစီမံပေးမလဲ
ရလဒ် တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် အဆင်မပြေလို့ မ၀င်တာကို ဒီလိုပြောပြီဆိုရင် ကြာလာတော့ ဒိယောင်္ကျားလဲ ဒီ အိမ်သူကို ပစ်ပြေးချင်လာမှာပါ
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် သူ့ဝင်ငွေနည်းတာ ကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်မယ် ဘယ်လို တခြားဝင်ငွေရအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကြံတွေးလာပါမယ် ..အိမ်သူရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်လာမှာပါ
ပြသနာ ခွင့်ခဏခဏယူတတ်သော အလုပ်တွင်ပေါ့လျော့သော ၀န်ထမ်းမှ ခွင့်ထပ်မံတောင်းခံခြင်း
ခွင့်ပေးမပေးဆိုတာ အထက်က လူကြိးကဆုံးဖြတ်ရမှာပါ
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း မင်းကခွင့်ယူထားတာတွေကလဲများမှများ အလုပ်ကလဲ ကချလာပဲ ရုံးချိန်ကလဲအမြဲနောက်ကျ တယ် ပြန်တော့လဲစောစောပြန်တယ် အလုပ်ကိုလဲစိတ်ဝင်တစားမလုပ်ဘူး $#%^&^*&(*()ဒါကြောင့်ခွင့်ထပ်မပေးနိုင်ဘူး
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း မင်းခွင့်ယူထားတာကတော်တော်လေးများနေတယ် ..ခုလက်ရှိမှာလဲ လူအင်အားအရ မင်းကိုခွင့်ပေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
မင်းသာ လုပ်ငန်းအတွက် တခြားအကျိုးဆောင် ထားတာတွေရှိရင်တော့လဲ တမျိုးတဖုံစဉ်းစားပေးနိုင်ပါတယ် ခုတော့ ခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူး
ရလဒ် တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် ခွင့်မရတာက တခု သူ့အပြစ်ဟောင်းတွေပါ ဖော်တော့ ဒေါသပုန်ထလို့ ပြသနာ ရှုပ်ပါမယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် ခွင့်မရလို့ စိတ်ခုပေမဲ့ မှန်တဲ့ အချက်ကိုသာထောက်ပြလို့ ပြောချင်ပေမဲ့ နင်နေမှာ အမှန်ပါပဲ
ပြသနာ လုပ်ငန်းမှ ပေးမယ်ပြောပြီး မပေးသော အပိုဆောင်းငွေ(bonus )ကိုဝန်ထမ်းမှ တောင်းခံခြင်း
တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်းရန်ဖြစ်ခြင်း ဒီ အပိုဆောင်းငွေကိုပေးမယ်ဆိုပြီး မပေးဘူး မနှစ်ကလဲ ကော်မရှင်ခတွေနှုတ်တယ် အိုဗာတိုင်းကလဲပေးတာနည်းတယ် #@%$#^^&*ခု ဒီ (bonus) ကိုလိုချင်တယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်း အပိုဆောင်းငွေကိုပေးမယ်လို့ ဘယ်အချိန်တုန်းက ဘယ်နေရာမှာ ဘာကိစ္စနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ပြောထားခဲ့ပါတယ် ခု ဒိငွေကို ဘယ်လိုအရေးတကြီးကိစ္စရှိနေလို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိနေလို့ လိုချင်လို့ပါ.. အသုံးလိုအပ်နေလို့ပါ..ခုရနိုင်မလား
ရလဒ် တဖက်သတ် အနိုင်ပိုင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အတွက် သူများအားနည်းချက်ကို ထောက်မှတော့ သူကလဲကိုယ် တာဝန်မကျေတာကို ပြန်ထောက်ပါမယ်
တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်ခြင်းအတွက် သူ့အတွက် မငြင်းနိုင်အောင် သေချာတိကျစွာပြောသလို ကိုယ့်အပေါ်မညိုငြင်အောင်လဲ ပြောတာပါ.
ခုလောက် ဥပမာတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျန်တာကိုတွေးဆ လို့ တရားမျှတစွာရန်ဖြစ်နိုင်မှာပါ..
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ငြင်းခုံမယ်ကြံတိုင်း ကိုယ်က တရားမျှတာစွာ ငြင်းခုံခြင်း (ရန်ဖြစ်ခြင်း)ဖြစ်ပါစေ..
မမေ့နဲ့နော်..ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ရှိနေတဲ့ ပြသနာကိုသာအာရုံစိုက်လို့ ဖြစ်ပြီးသား မဆိုင်တဲ့ တခြားကိစ္စတွေကို လုံးဝ (လုံးဝ) ဆွဲမထည့်ပါနှင့်
ကိုးကား counselling နှင့် case work မှ သင်ခန်းစာများ ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ ရေဒီယို အသံလွင့် အကြံပေးအစီအစဉ် တို့ကို ဖတ်ရှု ကြားနာပြီး မြန်မာလို နားလည်သမျှ ရေးသားပါသည် ။ ။ ၀င်းသု
Posted by Win Thu at 7:31 PM No comments:
မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေမှ သိသင့်သော မိသားစုဥပဒေများ
L@w & Custom in Myanmar
Posted by an@w on 2:16 AM in မိန်းကလေး(၈)မျိုး
“မနုကျယ် ဓမ္မသတ်“ မိန်းကလေး(၈)မျိုး ဖော်ပြထားပါသည်။
(၁) အမိစောင့်သော မိန်းကလေး
(၂) အဘစောင့်သော မိန်းကလေး
(၃) အမိအဘစောင့်သော မိန်းကလေး
(၄) မောင်စောင့်သော မိန်းကလေး
(၅) အမစောင့်သော မိန်းကလေး
(၆) အမျိုးစောင့်သော မိန်းကလေး
(၇) အနွယ်စောင့်သော မိန်းကလေး
(၈) သီတင်းသုံးဖော်စောင့်သော မိန်းကလေး တို့ဖြစ်သည်။
Posted by an@w on 2:13 AM in ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်း
ယောက်ျားတဦးက မိန်းမတဦးအား ထိမ်းမြားမည်ဟု အယုံသွင်းလျက် ကာမကိုရယူပြီး နောက်ထိမ်းမြားရန် ငြင်းဆန်ခြင်းသည် ” ပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေအရ” ကတိပျက်ကွက်ခြင်း မမြောက်နိုင်သော်လည်း ”ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရ” လိမ်လည်ခြင်းမြောက်နိုင်ပါသည်။
”ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ” ပုဒ်မ ၄၁၇ အရ တနှစ်ထိထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ကျရောက်နိုင်ကြောင်း နှမချင်းမစာနာ ကြောရုံသာ ကြံလိုသည့် ယောက်ျား များသိနားလည်ထားသင့်ပါသည်။
Posted by an@w on 1:58 AM in သွေးသားတော်စပ်မှု
မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ အရတရားဝင် အတည်ဖြစ်သည့် ထိမ်းမြားမှု မြောက်စေရန် မှာ
ထိမ်းမြားသူနှစ်ဦးသည် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်မခံနိုင်သော သွေးသားတော်စပ်မှုကိုရှောင်ရပါမည်။
တည်ဆဲ မြန်မာဓလေ့ ထုံးတမ်းများ
Posted by an@w on 12:57 AM in တည်ဆဲ မြန်မာဓလေ့ ထုံးတမ်းများ
(၃)တည်ဆဲ မြန်မာဓလေ့ ထုံးတမ်းများ
ဓမ္မသတ်ကို စီရင်ထုံးကလွှမ်းမိုးပြီး ၊စီရင်ထုံးကို တည်ဆဲ ဓလေ့ထုံးတမ်းကလွှမ်းမိုးပါသည်။တည်ဆဲဓလေ့ထုံးတမ်းကို ဆန့်ကျင်လာပါက တည်ဆဲ ဓလေ့ထုံးတမ်းကို စီရင်ထုံးဖွဲ့ရပါသည်။
ဘာသာတူ လူမျိုးခြားများနှင့် ထိမ်းမြားခြင်း
Posted by an@w on 2:09 AM in ဘာသာတူ လူမျိုးခြားများနှင့် ထိမ်းမြားခြင်း
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများသည် ဘာသာခြားနှင့်ထိမ်းမြားမှသာ နစ်နာခံခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါ၊ ဘာသာတူလူမျိုးခြားနှင့် ထိမ်းမြားပါကလည်းနစ်နာခံခဲ့ရပါသည်။မြန်မာနှင့် တရုတ်တို့သည် အများအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ပါသည်။သို့သော်လူမျိုးကခြားပါသည်။ဘာသာတူသဖြင့် ဘာသာကိုအကြောင်းပြပြီး ပြသနာမပွားနိုင်ရာ လူမျိုးကိုအကြောင်းပြပြီးပြသနာများစွာရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လျှင် မည်သည့်လူမျိုးဖြစ်စေ ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် အမွေဆက်ခံခြင်းနှစ်ရပ်လုံးနှင့်စပ်လျဉ်းက အခြေခံအားဖြင့် ”မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေ”နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ မသက်ဆိုင်လိုသူများသည် အောက်ပါ(၃)ချက်ကိုထင်ရှားအောင်ပြသရန် လိုပါသည်။
(၁) သူနှင့်ဆိုင်သော ဓလေ့ထုံးတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေကဲ့သို့ အတည်ဖြစ်နေသည်။
(၂)ထိုဓလေ့ထုံးတမ်းသည် မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။
(၃) ထိုဓလေ့ထုံးတမ်းသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများအား ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေရ -တို့ဖြစ်သည်။
Posted by an@w on 2:07 AM in ဘာသာခြားနှင့်ထိမ်းမြားခြင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာ-များအတွက်ထိမ်းမြားခြင်းသည် ဘာသာရေး ကင်းလွတ်သည့် လူမှုရေးကိစ္စသာဖြစ်ပါသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ထိမ်းမြားလိုသည့် ဘာသာခြားသည်သူ၏ ကိုးကွယ်ရင်းဘာသာကိုစွန့်ပယ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းရန်မလိုပါ။ထိမ်းမြားပြီးနောက် အခြားဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလည်းထိမ်းမြားခြင်း မပျက်ပြယ်ပါ၊ လွန်စွာလွတ်လပ်၍ လွယ်ကူလှပါသည်။
ခရစ်ယာန်၊ မဟာမေဒင်နှင့် ဟိန္ဒူ စသည့်ဘာသာများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ကဲ့သို့ လူမှုရေး စည်းကမ်းသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေးအတားအဆီးများရှိပါ သည်။
မဟာမေဒင်များသည် မဟာမေဒင်ဘာသာဝင်အချင်းချင်း တရားဝင်ထိမ်းမြားနိုင်ပါသည်။ဘာသာခြားနှင့်တရားဝင်ထိမ်းမြားခွင့် လုံးဝမရှိပါ။ဘာသာခြားသည် မဟာမေဒင်နှင့် ထိမ်းမြားလိုလျှင် မဟာမေဒင်ဘာသာကို ပထမကူးပြောင်းရပါသည်။ပြီးမှ တရားဝင်ထိမ်းမြားလက်ထက်ခွင့်ရပါသည်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မဟာမေဒင်ဖြစ်သဖြင့် တရားဝင်ထိမ်းမြားပြီးလည်း တဦးက မဟာမေဒင်ဘာသာကိုစွန့်ပယ်၍ အခြားဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလျှင် ယင်း ထိမ်းမြားခြင်းသည် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်ပါသည်။
ဟိန္ဒူများအဖို့မူ မဟာမေဒင်များထက်ပင် ထိမ်းမြားခြင်းတွင် ကျပ်တည်းပါသည်။ဘာသာခြားနှင့်မဆိုထားဘိ၊ ဟိန္ဒူလူမျိုး အချင်းချင်းပင် ဇာတ်မတူက တရားဝင် ထိမ်းမြား၍မရပါ။ ထို့ကြောင့်ဘာသာခြား လူမျိုးခြားတဦးသည် ဟိန္ဒူနှင့် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ တရားဝင်ထိမ်းမြားခွင့်မရပါ။
ခရစ်ယာန်များသည် မဟာမေဒင်နှင့် ဟိန္ဒူတို့လောက်မကျပ်တည်းပါ သို့သော် ဥပဒေအရ မလွဲမသွေပြုလုပ်ရသည့် သတ်မှတ်ချက်များရှိပါသည်။ ပုံစံမှာထိမ်းများခြင်းကို ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာရှေ့တွင် ဖြစ်စေ၊ ထိမ်းမြားမှုဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် အရာရှိရှေ့တွင်ဖြစ်စေ သက်သေများနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
Posted by an@w on 8:07 AM in စပ်ယှက်မှု
ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေး တို့အလိုတူမှားမိကြလျှင် သူတို့ကို ထိမ်းမြားပေးရန် ယောက်ျားလေး၏မိဘတွင် ငြင်းပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ မိန်းကလေးအိမ် လာနေသည့်ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေးသည် မိန်းကလေး၏ မိဘသိလျက် အလိုတူမှားနေလျှင် ယင်းမိန်းကလေးနှင့် ယောက်ျားလေးကို မိန်းကလေးရှင်မိဘများက ထိမ်းမြားပေးရပါမည်။
Posted by an@w on 2:06 AM in ဆန္ဒသဘောထား
ထိမ်းမြားမည့်ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေးတို့၏ဆန္ဒတူညီမှု ရှိရပါမည်။ သူတို့၏ဆန္ဒသည် ပဋိညာဉ် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၄ နှင့် အညီ လွတ်လပ်စွာ ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ရပါမည်။နောင်ကာလတွင် ထိမ်းမြားရန်အတွက် ကတိထားခြင်း မဖြစ်ရပါ။ ထို့ပြင် မိန်းကလေးသည် တခုလပ်၊မုဆိုးမ မဟုတ်ဘဲအသက် (၂၀) မပြည့်သေးသည့် အပျိုစင်ဖြစ်လျှင် သူ၏ ဆန္ဒအပြင် မိဘအုပ်ထိန်းသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်လည်းပါရှိရပါမည်။ မိန်းကလေး၏ ဆန္ဒမပါရှိလျှင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၆-အရ များယောင်းမှုကျုးလွန်ရာ ရောက်နိုင်ပါသည်။
Posted by Win Thu at 8:59 PM No comments:
Posted by Win Thu at 8:55 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူငယ်များအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ မိတ်ဆက်
လူအမည် = သိဒ္ဓတ္ထ
ဘုရားဘွဲ့အမည်တော် = ဂေါတမဗုဒ္ဓ
မွေးသက္ကရာဇ် = မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့ (BC- 623 ခန့်)
မိဘအမည် = ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဓနမင်း၊ မယ်တော် မဟာမာယာဒေဝီ မိဖုရား
နေပြည်တော် = ကပိလဝတ်မင်းနေပြည်တော် (ယခုခေတ် နီပေါနယ်)
အမျိုးအနွယ် = သကျသာကီဝင် မင်းမျိုး
အိမ်ထောင်ပြုချိန် = အသက် ၁၆နှစ်အရွယ်
ဇနီး = ဖွားဖက်တော် ဘဒ္ဒကဉ္စနာ ယသောဓရာ
သားတော် = ရာဟုလာ
နန်းစည်းစိမ်စံနှစ် = ၂၉နှစ် (မွေးကတည်းက တောထွက်ချိန်အထိ)
တောထွက်ချိန် = သက်တော် ၂၉နှစ်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ တနင်္လာနေ့ (BC- 594 ခန့်)
ဒုက္ကရစရိယကျင့်သည့်ကာလ = ၆ နှစ် (ခဲရင်းစွာကျင့်ရသည့် အကျင့်ဖြစ်သဖြင့် ဒုက္ကရစရိယဟုခေါ်သည်၊ ဒုက္ခစရိယ မဟုတ်ပါ။)
ဘုရားဖြစ်ချိန် = သက်တော် ၃၅နှစ်၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (BC- 588 ခန့်)
တရားဟောသည့်ကာလ = ၄၅နှစ် (သက်တော် ၃၅မှ သက်တော် ၈၀အထိ)
ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည့်နှစ် = သက်တော် ၈၀၊ ဝါတော် ၄၅ဝါ၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ (BC- 543 ခန့်)
ဒါကဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ ဖြစ်တော်စဉ် အကျဉ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးသိထားဖို့လိုတာက ဗုဒ္ဓဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိသင့်တာလေးတွေ သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတစ်ခုမှ မသိဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရား၊ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ယုံကြည်မှု တရားတွေကို နည်းနည်းလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသိတစ်ခု ရရှိစေဖို့ အခုတင်ပြခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိတ်ဆက်လေးကို လေ့လာပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေကို သိအောင်ကြိုးစားရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိအကျင့် ထပ်တူဖြစ်အောင်သာ လေ့လာကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြပါလို့ စေတနာကောင်းနဲ့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Win Thu at 8:52 PM 1 comment:
လှချင်တဲ့ သမီးကလေးများသို့(အမေ လူထုဒေါ်အမာ)
ပြင်ဦးလွင်မှာ အနားယူနေရတော့ အားနေတဲ့အချိန်မှာတီဗွီကလာတဲ့ အနောက်က ရုပ်ရှင်ကားတွေကို တစ်ခါတလေ ဝင်ကြည့်မိတယ်။
ကြည်တဲ့အခါ ပစ်ခတ်နေတာတွေကလည်း များမှများ၊ အဲဒီလို ပစ်ခတ်တာတွေမဟုတ်ပြန်တော့လည်း ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမ တွေ့ခန်းတွေ၊ အဲဒါတွေကလည်း။တော်ရုံမဟုတ်ဘူး၊ ရေချိုးကန်ထဲမှာလည်း ပါရဲ့၊ အိပ်ရပေါ်မှာလည်းပါရဲ့၊ပြီးတော့ တွေ့နေလိုက်ကြတာက အမေတို့ အဘွားကြီးတွေအနေနဲ့ ကြည့်ရတာစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးကိုးလူမျိုးစုံ ဝင်ကြထွက်ကြတဲ့စားသောက်ဆိုင်လိုနေရာမျိုးတွေ၊ ကပွဲခန်းတွေပြပြန်တော့လည်း မိန်းကလေးတွေ ကပြနေကြရတာမှာ ဝတ်စားထားရတာက ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖုံးတယ်ဆိုရုံ၊ အထက်ကလည်း
ရင်သားလေး နှစ်ခုကာရုံ၊ အောက်ကလည်း လက်တစ်ဝါးစာလောက်ကာပြီးတော့လှုပ်ရှားကပြရတာကလည်း ပြောဝံ့စရာမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ အမေက သြော်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ မိန်းကလေးတွေ ဝမ်းရေးအတွက် ရှာဖွေစားသောက်ရပုံကလည်း စိတ်ဆင်းရဲစရာ ကောင်းလှပါကလား။ သနားပါတယ် သူတို့ဘဝ လို့ အောက်မေ့မိတယ်။ ဒါနဲ့ ရန်ကုန်ကလာတဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေ
ဝတ်ကြစားကြတာနဲ့ ပက်သက်လို့ ပြောမိတော့ အဲဒီမိတ်ဆွေက ရန်ကုန်မှာ မိန်းကလေးတစ်ချို့ရဲ့ခါးပေါ်မှာ ထဘီမရှိတော့ဘဲ ဘောင်းဘီအတို၊ မတိုမရှည်နဲ့ဘောင်းဘီအရှည် ဝတ်တဲ့လူက ဝတ်တယ်၊ စကတ်ဆိုပြီး ၂ ကွဲ ၃ ကွဲ အတိုကွဲအရှည်ကွဲတွေကို ဝတ်တဲ့လူက ဝတ်တယ်။ အဲဒါထက် အခုမြင်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက မိန်းကလေးတွေလိုပဲ အင်္ကျီတိုနဲ့ ချက်ဖော်ဝတ်တဲ့ ကလေးမမျိုး
တစ်ယောက်တလေတောင်ပေါ်နေပြီ။ အဲဒီချက်ဖော်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ချက်မှာ ကျောက်မျက်ရတနာလည်း ကပ်ထားဆင်ထားသတဲ့ လို့ အင်မတန်ဆန်းတဲ့ သတင်းကို ပြောပြတော့ အမေက ဘုရားတမိတယ်။အမေတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ ခါးပေါ်မှာ ထဘီလေးတော့
လုံလုံခြုံခြုံ ရှိစေချင်သေးတယ်လို့ ပြောနေ ရေးနေပေမယ့် မိန်းကလေးတွေဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ်ဖြစ်အောင် ဝတ်စားနေကြတဲ့ အကွဲတွေအခွဲတွေကို မတော်ပါဘူးလို့ ရေးတဲ့ပြောတဲ့လူက နည်းပြီး မဂ္ဂဇင်း တစ်ချို့နဲ့ ဂျာနယ်များကမိန်းကလေးတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ပြင်ပုံ အသစ်အဆန်းအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြရေးသား အားပေးနေကြတာက အများသားကိုး။
မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ်တွေသာမက ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာကလည်းကြည့်လိုက်ရင် အတုခိုးမှားစရာတွေကိုသာ အားပေးအားမြှောက်ပြုနေတဲ့
ပြကွက်တွေကို မြင်ရတယ်။ လူဆိုတာ မြင်ဖန်များတော့ ငယ်သတဲ့၊နမ်းဖန်များတော့ ပြယ်သတဲ့
အဲဒီတော့ အမေက စကားရိုင်းရိုင်းနဲ့ မေးချင်လာတယ်။ လူဟာ ရှိတာကို ဖော်တာ၊ မဖုံးတော့တာက ယဉ်ကျေးတာလား၊ ဖုံးတာက ယဉ်ကျေးတာလားလို့။
အဲဒီတော့ တချို့က အမေရယ် လူဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ ကောင်းနိုးရာရာကို လုပ်ကြတာပါ။ လူငယ်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို
လစ်လျူရှုလိုက်ပါတော့လို့။ ဒါလည်း သူတို့အနေနဲ့ ဆိုရင် ဟုတ်တာပေါ့လေ။ သူတို့နဲ့ အမေနဲ့က ခေတ်ချင်းကွာဟမှုက ရှိနေတာကိုး။
အနို့ပေမယ့် ကနေ့ အနောက်ကလာတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေက အားလုံးလုံလုံခြုံခြုံ ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ကုတ်အင်္ကျီဝတ်လို့ မိန်းကလေးတွေကတော့ နည်းပညာမျိုးစုံသုံး လှနိုးရာရာ အဆင်အပြင်အမျိုးမျိုး
စိတ်ကူးရသလောက် ထည့်ပြီး ရှိတာကို ဖော်နိုင်သမျှပေါ်အောင် ဖော်လှစ်ပြသနေကြရတယ်။
အဲဒါဟာ ကျားမ တန်းတူရှိသေးရဲ့လား။ မိန်းမတွေရဲ့ဘဝ ကျားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှုအတွက် တစ်သက်လုံး ကြိုးပမ်း အားထုတ်နေရတာလား၊ လူ့ဘဝ လူ့တာဝန်တွေကို ထမ်းရွက်ဖို့ မကြိုးစားရတော့ဘူးလားလို့ အောက်မေ့မလာရဘူးလားကွယ်။ မိန်းမတွေရဲ့ အဆုံးစွန်သော အားထုတ်လုပ်ဆောင်ရချက်က ယောကျားတွေအတွက် ဆိုတာပဲလား။ တခြား ဘာမှ
အဖိုးတန်တဲ့အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလား၊ အမေရယ် ဒီလိုဆိုရင် တချို့နိုင်ငံတွေက အမျိုးသမီးတွေကို
တစ်ကိုယ်လုံးဘာမှ လူမမြင်ရအောင် အဝတ်ကြီး ခြေဆုံးခေါင်းဖျား ဖုံးနေရတာမျိုးကိုကော အမေ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲလို့ မေးလာရင်….အဲဒါဟာ မိန်းမကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လောက်တန်ဖိုးထားတဲ့သဘော၊ မိန်းမကို လူ့အခွင့်အရေး တစ်မူးသားမှ
မပေးတဲ့လုပ်ရပ်မို့ အမေက သိပ်ရှုတ်ချတာပေါ့။ လင်ယောကျားတစ်ယောက်ကအပိုင်မွေးထားတဲ့ ထမင်းချက် ကလေးထိန်းတဲ့ လင်ယောကျားအလို ဖြည့်ရတဲ့လူသာသာပဲ။ အဲဒီထက် ဘာမှ မပိုပါဘူး။
အမေတို့က မိန်းမဆိုတာ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအပြည့်ရှိတဲ့ လူသား၊ လူ့လောကကို ယောင်္ကျားတွေနဲ့ တန်းတူရည်တူ တည်ဆောက်နေရတဲ့ လူသား၊ လူ့လောက သာယာဝပြောရေးအတွက် အားလုံးနဲ့အတူတူ တာဝန်ရှိတဲ့လူသား ဖြစ်စေချင်တာပါပဲ။
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ထက်မှလည်း မနိမ့်ကျစေချင်ဘူး။ တိရစ္ဆာန်လောကမှာတော့ နိုင်သူက အနိုင်ကျင့်တာလေ။
အားနည်းရင် အရှုံးပေးရတယ်။ အားကြီးရင် အနိုင်ကျင့်တယ်။ တို့က တိရစ္ဆာန်ထက်အများကြီး အဆင့်အတန်းမြင့်တာပဲဟာ။ အဲဒီတော့ တို့အားလုံးအတွက် လူဟာလူနဲ့တူအောင် တန်အောင်ပဲ ဖြစ်ကြစေချင်တယ်။
ကနေ့ အမေတို့နိုင်ငံမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး စသဖြင့်လုပ်ရမှာတွေက တောင်လိုပုံပြီး စောင့်နေပါတယ်။ အဲဒီအလုပ်တွေကို လှပပေါ်လွင် ကြွမြောက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားလုံးပန်းနေရတာနဲ့ အချိန်ကုန်
ငွေကုန်ခံနေကြရမှာလား၊ မိန်းကလေးတွေမှာ ဒီထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထမ်းရွက်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားကြရဦးမှာပါ။ လှအောင်ပအောင်၊ ယောင်္ကျားတွေ မြင်ရင် ကြိုက်ချင် ချစ်ချင်လာအောင် ရှိသမျှဖော်ထုတ်မြှူဆွယ်တယ်ဆိုတာ အလွန်သေးသိမ်တဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ထားပါ။ တို့မ်ိန်းမတွေမှာ အင်မတန် ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေ ထမ်းရွက်ဖို့
လှလှ မလှလှ ကျန်းမာဖို့ စိတ်ကောင်းစေတနာရှိဖို့
အသိအမြင် မြင့်မားဖို့ ငါတို့ကြိုးစားနေရမှာပါ။
ဒါကြောင့် သမီးတို့ လှချင်တာဟာ ကောင်းရဲ့လား။
Posted by Win Thu at 10:00 PM No comments:
မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား - ဖေမြင့်
၁၉၁၆တွင် ၀စ္စကွန်ဆင်ပြည်နယ် ဝေါ်ကီရှာမြို့၌ ဖွားသည်။
ရေဒီယို၌ ကျေးလက်တေးများ တီးခတ်သီဆိုရင်း စတင်နာမည်ရခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂျပ်ဇ်ဂီတဘက်သို့ ကူးပြောင်းကာ လက်(စ)ပေါလ်သုံးယောက်ဝိုင်းကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ၁၉၃၈ မှ ၁၉၄၁ အတွင်း နာမည်ကြီးဖရက်(ဒ)၀ါရင်းအဖွဲ့နှင့် လိုက်ပါ ဖျော်ဖြေရင်း သုံးယောက်ဝိုင်း ပို၍လူသိများလာသည်။ ၁၉၄၂တွင် ဟောလိဝုဒ်သို့ရောက်သည်။
၁၉၅၀ ကျော်နှစ်များအတွင်း သူအထူးကျော်ကြား အောင်မြင်လာသည်။ အဓိက,က ဇွဲနပဲကြီးကြီးနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သူ၏ စမ်းသပ်တီထွင်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂစ်တာဖြင့် မာလတီပယ် ရီကော့ဒင်းများ သူ စတင်ပြုလုပ်သည်။ ဆောလစ် ‘လော့ဂ်’ ဂစ်တာကို တီထွင်သည်။ လျှပ်စစ်ဂစ်တာ ရေပန်းစားအောင် သူကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ဇနီးမေရီဖို့ဒ်နှင့်တွဲဖက်၍ ထင်ရှားသော ဓာတ်ပြား အချပ်ပေါင်းများစွာ သွင်းခဲ့ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားတွင်လည်း နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင် ပူးတွဲတင်ဆက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းကာလ၌ လျှပ်စစ်ဂစ်တာအား ပို၍ပီပြင်ထက်မြက်သောတူရိယာပစ္စည်း ဖြစ်အောင် မွမ်းမံပြုပြင်သော အလုပ်ကိုပင်နှစ်မြှပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
‘ကိုယ်တကယ်လုပ်မကြည့်သေးပဲနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်မရဘူး လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့’
ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနှင့် တည်ဆောက်ထားသည့် နံရံတံတိုင်းဟူသည်လည်း နာနာဖိတွန်းလျှင် တစ်ချိန်မှာ ပြိုလဲသွားနိုင်သည်။
အဲသည်နေ့တုန်းက အလုပ်သမားတွေ မြောင်းတူးနေကြသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်က မြောင်းကို စိတ်မ၀င်စား။ နေ့လယ်စာ စားရန် သူတို့နားကြသည့်အချိန် ဆံပင်ဖြူကျိုးကျဲ နှင့် အလုပ်သမားကြီး တစ်ယောက် သူ့ဘာဂျာဟောင်းလေး ထုတ်ပြီး မှုတ်သည့်အခါမှသာ ကျွန်တော်အံ့သြသဘောကျကာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ အဲသည်တုန်းက ကျွန်တော် ကျောင်းသားလေးပဲ ရှိသေးသည်။ ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင် ‘ငါသာ ဒီလိုမှုတ်တတ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ’ ဟုတွေးနေမိသည်။
သည်အခိုက် အလုပ်သမားကြီးက ဘာဂျာကို ကျွန်တော့်ဆီ ရုတ်တရက်ထိုးပေးသည်။ ‘လုပ်ကွာချာတိတ်မှုတ်ကြည့်စမ်း’
လူကြီးက ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်သည်။ ပြီးတော့မှ ‘ဘယ်ဟုတ်မလဲ ကလေးရ ၊ မှုတ်သာကြည့်စမ်းပါ ၊ တော်ကြာတော့ မင်းကျွမ်းသွားမှာ’ ဟုဆိုသည်။ အဲသည်နောက် သူက ကျွန်တော့်တစ်သက်တာအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး စကားတစ်ခွန်းကို ဆိုသည်။ ‘ကိုယ် တကယ်လုပ်မကြည့်သေးဘဲနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်မရဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့ကွ’ ဟူ၍။
တစ်နေ့မှာ စန္ဒရားဆရာက အမေ့ထံ စာတစ်စောင် ကျွန်တော်နှင့် ပေးပါသည်။ စာက ကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်၍မညှာမတာရေးထားသည့်စာ။
‘ခင်ဗျားရဲ့သား လက်စတာဟာ ဂီတပညာ ဘယ်တော့မှ သင်လို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူး ၊ ကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်ထပ်မသင်နိုင်တော့ပါ’တဲ့။
သည်စာ ဖတ်ပြီးနောက် အလုပ်သမားကြီး ပြောခဲ့သောစကားကို ကျွန်တော်ပြေးသတိရသည်။
စင်စစ် ကျွန်တော်နောက်မဆုတ်ချင်ပါ။ ကျွန်တော်ဂီတပညာ သင်၍ မရနိုင်ဆိုတာ သေချာအောင်မှ စမ်းသပ်မကြည့်ရသေးတာ။ သင်လို့ရတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်အောင် ငါ ကြိုးစားမယ်ဟုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အဲသည်နှစ်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာ ဂစ်တာအတီးသင်သည်။ ကျွန်တော့်အိမ်နားမှာ ဂစ်တာသမားတစ်ယောက်ရှိရာ အဲသည်လူ တီးသည့်အခါ ဘေးက အသေအချာကြည့်ပြီး ကြိုးခြောက်ကြိုးပေါ်မှာ လက်ချောင်းလေးတွေ ဘယ်အနေအထား ထား၍တီးလျှင် ဘယ်အသံထွက်သည်ဆိုတာ မှတ်သားကာ ၄င်းအတိုင်း ထပ်တူလိုက်တီး ကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်ယူရသည့်ချိန်တာကရှည်ကြာလှပါသည်။ သို့သော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ကိုယ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တီးခတ်နိုင်မည့်တူရိယာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်နှစ်ဆယ် အရွယ်မှာ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ဂျပ်ဇ်ဂစ်တာကို ပင်တိုင်ထားပြီး သုံးယောက်ဝိုင်းတစ်ခု ဖွဲ့စည်းသည်။ ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားလာရမည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်နှင့် နယူးယောက်သို့ တက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် နယူးယောက်ရောက်တော့ နာမည်ကြီးတီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက ကျွန်တော်တို့လို ရွက်ပုန်းသီး ပညာသည်တွေကို ကောင်းကောင်းပင် မဆက်ဆံချင်ကြတာ ကျွန်တော်တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ လက်သံကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ပင်အချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင်သူတို့အလုပ်များနေကြသည်။
တစ်နေ့ ဘရော့ဒ်ဝေး သဘင်ဂီတ လမ်းမ အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခု၏ ကော်ရစ်ဒါမှာ ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အဖွဲ့ ထိုင်စောင့်နေဆဲ နာမည်ကြီး ပင်ဆီလ်ဗေးနီးယင်းအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် ဖရက်(ဒ) ၀ါရင်း ဓါတ်လှေကားဆီသို့ လျှောက်သွားတာ ကျွန်တော်လှမ်းမြင်သည်။ ရုတ်တရက်ပင် ကျွန်တော် သည်လူ့ကို သည်နေရာမှာပဲ တီးပြလိုက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့သားတစ်ယောက်က လန့်သွားသည်။ ‘ဟ ဒီနေရာကြီးမှာ ဖြစ်ပါ့မလားကွ’ဟု ဆိုသည်။
‘တကယ်ဖြစ်မဖြစ် သေချာအောင် စမ်းကြည့်တာပေါ့ကွာ’ ကျွန်တော်ပြောရင်း ဂစ်တာကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ ကံအားလျော်စွာ ဓါတ်လှေကားကလည်း ကြာနေသည်။ ကျွန်တော်တို့လက်သံကို ကြားရသောအခါ ဖရက်(ဒ) အံ့အားသင့်သွားသည်။ ဓါတ်လှေကား ရောက်လာ၍ လှေကားထဲ သူမ၀င်မီမှာပင် ကျွန်တော်တို့ ‘လက်(စ) ပေါလ် သုံးယောက်ဝိုင်း’ ကို သူငှားရမ်းပြီးဖြစ်သွားလေသည်။
ထို့နောက် နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာအောင် ကျွန်တော် ညစဉ်ညတိုင်း ဂစ်တာကို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ တီထွင်စမ်းသပ် တီးခတ်နေခဲ့သည်။ သည်တူရိယာပစ္စည်း တကယ်ထူးခြားပေါ်လွင်လာအောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် နည်းနာများ ကျွန်တော် မပြတ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဂစ်တာတစ်လက်တည်းနှင့်ပင် ဂစ်တာများစွာပါဝင်သော သံစုံတီးဝိုင်းကြီးတစ်ခုမှ ထွက်လာသည့်အသံမျိုး ရအောင် ဖန်တီးရန် နည်းလမ်းကို ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်အတွက် ရစ်သမ် ၊ မယ်လဒီ ၊ ဟာမိုနီ ၊ ဘက်ဂရောင်း စသည်တို့ကို တစ်ခုချင်း သီးခြားစီ တီးခတ်ပြီး အသံသွင်းယူသည်။ ထို့နောက် ၄င်းဓာတ်ပြားများအားလုံးမှ အသံစုံကို ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်တည်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ထည့်သွင်းသည်။ ဤသည်ကား ယခုအခါ မာလတီပယ်(Multiples)ဟုလူသိများနေပြီဖြစ်သည့်နည်းဖြစ်ပါသည်။
ပထမဆုံး မာလတီပယ်ဓာတ်ပြားများ သွင်းရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖြစ်ပြီးနောက် မိသားစုထံ အလည်ပြန်ခဲ့သည်။ အိမ်မှာ ကောင်းကောင်းအနားယူပြီး အပြန်လမ်းတွင် ကားဘီးချော်ပြီး လမ်းဘေး ထိုးကျသည်။ ဆီးနှင်းတွေထဲမှာ ရှစ်နာရီလောက် ကြာပြီးမှ ကျွန်တော့်ကို တွေ့ကြကာ လူနာတင်ယာဉ်နှင့်ဆေးရုံသို့ယူဆောင်ကြသည်။
ဆေးရုံက လူနာမှတ်တမ်းမှာ ရေးသားထားသည့် ကျွန်တော့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာစာရင်းက ကြောက်စရာ ရှည်လျားလွန်းလှသည်။ ကျောရိုးဆစ် တချို့ ကျိုးသွားသည်။ ပခုံးနှစ်ဖက်လုံး ကျိုးသွားသည်။ နှာခေါင်းရိုး ကျိုးသည်၊ ညာဘက်လက်မောင်းရိုးက သုံးနေရာတိတိ ကျိုးသွားသည်။ အဲသည်နောက် နံရိုး အတော်များများ၊ တင်ရိုးခွေ၊ ပြီးတော့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံး။
တစ်နေ့နံနက်မှာ ဆရာဝန်တွေ ကျွန်တော့်ညာလက်မောင်းရိုးက ကျိုးကြေသွားတာတွေ သိပ်များနေသဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းနေကြောင်း သုံးသပ်ကြသည်။ သည်လက်ကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်လေမလားသူတို့ဆွေးနွေးကြသည်။
သူတို့ ပြောဆိုကြသည့် စကားများ၏ အနက် အဓိပ္ပာယ် အပြည့်အ၀ကို သေချာစွာ စေ့ငုနေမိသည့်အချိန် အခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ဘာသံမျှ မကြား။ ကျွန်တော် စဉ်းစားနေမိသည်က လက်မောင်းရင်းကသာ ဖြတ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့် ဂစ်တာသမားဘ၀ ဆုံးပြီ၊ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သမျှ သဲရေကျပြီ ဆိုတာပဲ ဖြစ်သည်။ ခုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းရင်းကပင် အတိတ်ကာလဆီသို့ ကျွန်တော် လွင့်မျောရောက်ရှိသွားသည်။ ဘာဂျာဟောင်းလေးကို မှုတ်နေသည့် မြောင်းတူးအလုပ်သမားကြီးဆီသို့။ ယခုအချိန်ထိ ကျွန်တော် ရရှိခဲ့သမျှ အောင်မြင်မှုသည်လည်း သူပေးသည့် အကြံဉာဏ်အတိုင်း လိုက်နာခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဆံဖြူကျိုးကျဲနှင့် သူ့ရုပ်သွင်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်လာသည်။
‘ကျွန်တော် ပြောပါရစေဆရာ၊ ဒီလက်မောင်းကို ဆရာတို့ တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားကြည့်ကြပါဦး၊ လုံးဝ မရတော့ဘူးဆိုတာ သေချာတော့မှပဲ မရဘူးလို့ လက်လျှော့ကြရအောင်လား ဆရာ’
သည်နောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ခွဲစိတ်ကြသည်။ ခြေထောက်က အရိုးကို လက်မောင်းဆီ ဆက်ပွားနိုင်ပြီးတော့မှသာ လက်တစ်ချောင်းလုံး ဖြတ်ပစ်ရတော့မည့် အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်သွားတော့သည်။ သို့သော် တံထောင်ဆစ်နေရာမှာ ပြဿနာကျန်နေသေးသည်။ တံထောင်ဆစ်နားတွင် အရိုးတွေ ကြေမွသွားသည်ဖြစ်ရာ အဲသည်နေရာတွင် သတ္တုပြားတစ်ခု အစားထိုးပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရသည်။ သည်နေရာမှာ အကွေးအဆန့်လုပ်၍ ရမည်မဟုတ်တော့။ ကွေးလျှင် အကွေးအတိုင်း ၊ ဆန့်လျှင် အဆန့်အတိုင်း တစ်သမတ်ရှိတော့မည်ဖြစ်ရာ ဆရာဝန်များအား ကျွန်တော် ဂစ်တာတီးရန် အဆင်ပြေသည့် အနေအထားအတိုင်းထားပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံလိုက်သည်။
တကယ် ဂစ်တာတီး၍ ရ မရ သေချာအောင်ကား တစ်နှစ်ခွဲလောက် ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ သို့သော် မရဘူး ဆိုတာ မသေချာမချင်း လက်မလျှော့ဘူးဟူသော မူဝါဒကို လက်ကိုင်ထားသူပီပီ အဲသည်စောင့်ဆိုင်းနေရစဉ် ကာလအတွင်းမှာ တေးသွားတွေ၊ တီးကွက်တွေကို ခေါင်းထဲမှာပဲ စဉ်းစားသည် ၊ စီစဉ်သည် ၊ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ စမ်းသပ်တီးခတ်ကြည့်နေသည်။
တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ဧရာမ လောင်းပလေး ဓာတ်ပြားကြီး တစ်ချပ် တည်ဆောက်မိလာသည်။ ကျွန်တော်ဂစ်တာ သေသေချာချာ ပြန်ကိုင်နိုင်သည့်အချိန် တီးခတ်မည့် ဂီတသံစဉ်တွေအားလုံးသည်ဓာတ်ပြားကြီးထဲမှာသိုမှီးထားသည်။
သည်လိုနှင့် နောက်ဆုံး ကျောက်ပတ်တီးဖြည်ရမည့်အချိန် ဆိုက်ရောက်လာပါသည်။ အဲသည်နောက်တွင် လုံးဝ အချိုးမကျဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ညာဘက်လက်ကို အရင်တုန်းက သူတတ်ခဲ့သမျှတွေ ပြန်လုပ်တတ်အောင် ခဲယဉ်းပင်ပန်းစွာ ပြန်လည်သင်ကြားခြင်း ပြုရပါသည်။ ထို့နောက်သုံးယောက်ဝိုင်းတစ်ခုထပ်မံထူထောင်ကာနယ်ပွဲစဉ်များစတင်သည်။
သည်လိုလုပ်ဖြစ်ရန်အတွက် ကျွန်တော် အတော်ကြီး သတ္တိမွေးခဲ့ရသည်။ ဇွဲကြီးကြီးနှင့်လည်း အားထုတ်ခဲ့ရပါသည်။ ယခင်ပုံမှန်အနေအထား ရောက်အောင် ကျွန်တော်ပြန်လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင် ဆိုသည်ကစင်ပေါ်တကယ်တက်ကြည့်မှသေချာပေါက်သိနိုင်မည်မဟုတ်လား။
တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့၊ တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ဆက်တိုက်ကူးကာ တစ်နှစ်လောက်ကြာအောင် ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့သည်။ အလွန်ပင်ပန်းသည်။ သို့သော် အဲသည်ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းလွန်းသော ခရီးစဉ်က အကျိုးရလဒ်ကြီးမားခဲ့သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရမီက လက်ကို မီအောင် ကျွန်တော် ပြန်လည်တီးခတ်လာနိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော် ဓာတ်ပြားတွေ ပြန်သွင်းဖြစ်သည်။ သည်အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်ဂစ်တာသံမှာ ဇနီးသည် မေရီဖို့ဒ်၏ အဆိုပါ တွဲဖက်ပါဝင်လာပြီ။ ကျွန်တော့်တို့ ဇနီးမောင်နှံ၏ ဓာတ်ပြားတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက နှစ်ခြိုက်စွာ နားသောတ ဆင်ကြသည်။ ဓာတ်ပြား ချပ်ပေါင်း ၁၇ သန်းကျော်မျှ ၀ယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသည်။ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်က လူငယ်များလောကတွင်လည်း ဂစ်တာ ဆိုသော တူရိယာပစ္စည်းက အကြီးအကျယ် ရေပန်းစားကာ အားတက်သရော လေ့ကျင့်တီးခတ်လာခဲ့ကြသည်။
များမကြာမီကမူ မိတ်ဆွေ ဂီတသမားတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နည်းတူ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်အနာတရဖြစ်သည့်အကြောင်းကြားသိရသည်။ သူက စန္ဒရားသမား ဖြစ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် စန္ဒရားလုံးဝမတီးနိုင်တော့ပြီ၊ ဂီတပညာရှင်ဘ၀ကို စွန့်လွှတ်ရတော့မည်ဟု ကြားရသည့်အခါ ကျွန်တော် သူ့ကို စာတွေ အစောင်စောင်ရေးကာ ဂီတကို မစွန့်လွှတ်ဖို့ ၊ ပြန်လည်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းသည်။
‘ကျွန်တော် မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာ’ သူ့ထံမှ စိတ်ပျက်စွာ အကြောင်းပြန်လာသည်။
‘မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သေချာလား ၊ သေချာအောင် ခင်ဗျား စမ်းကြည့်ပြီးပြီလား’ ဟူ၍ပဲ ကျွန်တော် ထပ်တလဲလဲ ပြန်မေးသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်တိုက်တွန်းမှု အောင်မြင်သွားသည်။ သူစန္ဒရားပြန်တီးသည်။ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့သော အနေအထားမှ နေ၍ တောက်ပသော အနာဂတ် တစ်ခု သူပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။
သည်လိုပဲ တစ်ကြိမ်မဟုတ် တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေမှာ အုတ်နံရံကြီး ကာဆီးထားသလို ခက်ခဲသော အနေအထားမျိုးကြုံရတတ်ပါသည်။ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းမရှိတော့ပြီဟု ထင်ရသည့်ပြသာနာမျိုး။ ဆောင်ရွက်ရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆရသော လုပ်ငန်းတာဝန်မျိုး။
သည်အနေအထားမျိုး ကြုံရသောအခါ ငါ မတတ်နိုင်ဟု အလွယ်တကူ မပြောပါနှင့်။ ငါ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာသလား လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ပါ။ မတတ်နိုင်တာ တကယ်သေချာပါပြီဆိုတော့မှသာ လက်လျှော့ပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အနေနှင့်မူ ငယ်စဉ်က တွေ့ဖူးသည့် မြောင်းတူးသူအလုပ်သမားကြီး၏ ကျေးဇူးကြီးမားလှသော သြ၀ါဒစကားကို လိုက်နာခဲ့သည့် အကျိုးကြောင့် ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနှင့် တည်ဆောက်ထားသည့် နံရံတံတိုင်းဟူသည်လည်း နာနာ ဖိတွန်းလျှင် တစ်ချိန်မှာ ပြိုလဲသွားနိုင်သည်ဆိုတာ တွေ့မြင်သိမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
Posted by Win Thu at 9:56 PM 1 comment:
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့်
တန်ဘိုး၇ှိသော LINK များ
တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ကံကောင်းစေသော အကြံပေးချက်များ
ထူးခြား (၉) ဌာနေ ရွှေတိဂုံမြေ
စေတီတော်မှ ညွှန်ပြသော သင်္ကေတများ
လေဖြတ်ခြင်း, အပူရှပ် မေ့မျောသွားခြင်း
မြန်မာပြည်ထွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများ
၁၀၀% မငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့ သံသယ
၆၃ နှစ်မြောက် ကျေးဇူးရှင်အာဇာနည်များနေ့
ကျွန်တော် တန်ဖိုးထားချင်ခဲ့တဲ့ အချစ်မျိုးပါ….
Flash နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာသီချင်းလေးတွေ
MYANMAR PROVERBS မြန်မာ စကားပုံများ
See You At The Top ! * ထိပ်ဆုံးမှာ တွေ့ကြမယ်......
valuable words သူတို့စာနဲ့သူတို့စကား
ကိုယ်ကြိုက်တာလေးရေးပြီး -submitt လုပ်ရုံပါ
ကုသိုလ်ရစေရန်အလို့ငှာ - Dhamma Darna
ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ အချက်(10)ချက်
သင်ဘာရည်ရွက်ချက်နဲ့ လူဖြစ်နေသလဲ- သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရား
ဗေဒင်........သင်တို့ကြိုက်သော သစ်သီးများနဲ့ သင်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
အောင်မြင်သော ဘ၀တစ်ခု၏ သင်္ကေတများ